Nhungamiro inokosha yekucherechedza miti nemashizha ezvisikwa zvose uye ukuru.
Unoda here kudzidza kuti ungaziva sei miti mumunharaunda yako? Nzvimbo yakanakisisa yokutanga nayo ndeyokutarisa pamashizha emuti.
Miti ine Mashizha . Ichi chikamu chikuru, saka ngatichiparadze mumapoka maviri makuru:
Miti ine nheyo kana mashizha akafanana . Misidhari nemisipiresi vane mashizha akafanana-mashizha anotarisa zvakanyanya seasati akazara mavhesi kupfuura mashizha kana mashizha. Miti yemisidhari ine magirasi uye zviduku zviduku.
Junipers , kune rumwe rutivi, vane bluish, berry-like cones.
Miti ine mashizha. Kuita kuti zvinhu zvive nyore, isu tave zvakare tinozoputsa chirongwa ichi kuva mapoka maviri:
Miti ine mashizha mashoma. Miti iyi ine jira rimwe rakabatanidzwa kune tsinde imwe neimwe. Mashizha ane makwenzi anogara akashandurwa anoshevedzwa mashizha asina kubhurwa nemiti nemashizha anoumba maumbirwo ari mumiganhu yawo anonzi mashizha akaputika. Kana muti wako usina mashizha asina kuvhara, iwe unofanirwa kuve uchitarisa kana kana usina mazino - kana masero kumativi aro.
Asina kusununguka uye akareruka (hapana meno). Magnolia ane mazhizha makuru, anosvibira nemashizha ane ruvara pasi pepasi. Urarame maoki ane nguva yakareba mashizha akaoma uye zvinyorwa zviduku. Dogwoods dzinosangana nemakona uye maruva 6-7 anoratidza rumwe rutivi rwemashizha emukatikati. Kana muti wako une mashizha ayo akareba kana akareba uye achionekwa akazara pamatavi mapfupi, angave ari Blackgum. Uye kana mashizha awo akareba uye akatarisa, angave ari Persimmon.
Asina kuremara uye akasvibiswa. Miti yemiti yakareba yakasvibira mashizha ane ganda. Basswood miti ine mashizha akazara nemazino akaoma uye nzvimbo isina kutarisa yakakomberedza stem. Elm miti inenge isinganzwisisiki pachigadziko uye zvinopinza kaviri kumativi. Kana miti yemuti wako yakanyorova uye ichipenya nemeno inotenderera kubva kumusoro, zvichida iri Beech. Kana mashizha ayo akafanana neomunzwa akabatwa kaviri, zvinogona kunge zviri Birch . Uye kana iine mashizha e-alliptical nejagged edges, zvichida iri Cherry.
Lobed. Kana muti wako une mashizha ane maitiro akasiyana-siyana pamuti mumwe chete, zvichida iSassafrass kana Mulberry.
Kana iyo lobes ichiita seinobuda kubva pakati nepakati seminwe paruoko, inonzi palmate uye maple, sweetgum, sycamore, kana poplar. Miti yemapuraneti ine marebe matatu kusvika mana uye yakarongedzwa zvakatarisana kune imwe neimwe pane bazi. Imiti yemascamore ine mashizha makuru ayo akareba kupfuura masendimita mana ane shabes pasi lobes uye kuchinja (kwete zvakananga kubva kune mumwe kune mumwe,) pabazi. Miti ine mashizha akafanana nenyeredzi ane hofu yakakosha inogona kunge iri Sweetgums. Uye zvinosimuka izvo zvinoita sezvo zvakagurwa kana kuti zvakaputirwa kumusoro nelobes maviri kune rumwe rutivi rwepakati pembambo pamwe pamwe nePoplars.
Kana maziso aya achionekwa kubva kumativi akawanda ari pakati pemvura, mashizha anoonekwa seine miti uye ingave muoki kana muti. White Oak miti ine lobes yakasungirirwa pamativi ose uye pasina spines. Mashizha emakorokvuku matsvuku akakomberedzwa nechepasi, asi akaputika kana kupona kumativi. Uye miti yeHolly ine michero mitsvuku yakatsvuka uye mashizha ane akacheka, akarondedzera lobes.
Miti ine mashizha emukati.
Mapapiro akawanda mashizha. Miti iri munharaunda ine mashizha akawanda anotaridzika kukura kubva pachikamu chimwechete chedu. Zvigwenzi zveBuckeye zvine mashizha marefu nemakona akadzika-mahedhedhedhedhe apo Horsechestnut miti ine shintwe yemiti uye mapepa manomwe anotsvaga muhute .
Pinnately compound mashizha. Miti ine iyo ine pinnate mashizha mashizha ane mapepa anokura kubva kumativi akawanda ari pedyo ne stem. Mashizha anowanika kaviri kabhuku (mapepa mukati memashizha,) zvinogona kunge zviri mumiti. Miti yeHickory ine mapepa mapfumbamwe asina kuenzana muhupamhi uye zvimwe kune imwe nzvimbo. Ashi miti ine mapepa ayo anotarisana kubva kune mumwe kune rumwe rutivi uye iyo inenge yakafanana uye yakakura. Miti yemasnut ane mapfumbamwe ane gumi nemakumi maviri nematanhatu akatarisa mapepa ezvimwewo. Uye miti yePecan ine mapepa gumi nemasere ane mavara akavezwa, akashongedzwa ane rukoti anoshandura pamativi.
15 Madzimai Ecologist Unofanira Kuziva
Upenyu muTundra: Coldest Biome Pasi Pano
8 yeHurumburu Inoparadza Zvikuru muUnited States
Nyika Biomes: Temperate Forests
Chii Chine Utsi! Kuderedza Kurasikirwa uye Kudzokorora
Nyika Biomes: Dhaka
8 Mhuka Dzinobata Upenyu
Mvura Inosvibisa: Zvinokonzera, Migumisiro, uye Kugadzirisa
Iyo Pyramid Yeupenyu
Shanduko (grammar uye yakagadzirwa)
Mazuva Akanangana Ezuva reArafat kubva muna 2017 kusvika muna 2025
Evhangeri yeKutaurirana Media
Nzira Yokuita Bhallet Barre
Chii Chako (Zuva) Chiratidzo?
"Muzororo" Pane Muti weKrisimusi pa White House Gore Ino?
Nzira Yokudhonza Uye Moto Moto Glass Tubing
Zvisarudzo zvepamusoro zvekutanga zvekudzimba dzimba dzekudzidza Chikoro
Makungwa eAlantic Ocean
Nzira Yokutsvaga Motokari Yakashandiswa
Stockton University GPA, SAT uye ACT Data
Kutsanangura Aeration paGorozi Dzidzo
Hydrophobic Definition uye Mienzaniso
Tarisa Shanduro ye 'Any' muSpain
Unogona Kubata Ice Yakasviba Here?
Wladimir vs Vitali Klitschko: Onai Kuti Hama dzaizobatana sei
10 Guru Hip-Hop Nyimbo Dzakatora Isaac Hayes
Kufungidzira Kunokosha Kuedza Kudzidzira
6 Nzira Dzakasiyana Dinosaur Kukwaniswa Kwedzidziso ... uye Nei Vasingashandi
Wana Magwaro Neaya Mazano Pamusoro peChirungu Chinyorwa
Ita Mishonga yeMashiripiti Wreath